Canug Ku Dhashay Afar Lugood & Aabaha Dhalay Oo Si Layaab Leh Iskaga Fogeeyay | Aayaha
Home»LAYAABKA»Canug Ku Dhashay Afar Lugood & Aabaha Dhalay Oo Si Layaab Leh Iskaga Fogeeyay
Aayaha editor Send an email November 21, 2018
Gabar yar oo leh 4 lugood oo ku dhalatay deegaanka Buyende ee bariga dalka Uganda ayaa niyad jab ku riday qoyskeeda, iyadoo loo baahanyahay malaayiin lacag ah si qalliin loogu sameeyo isla markaana labada lugood ee dheeraad ah looga jaro.
Haweeney lahu magacaabo Hadiija Namaganda, oo ah 32 ayaa dhashay gabadhan yar ee leh laba lugood ee caadiga ah iyo laba lugood ee kale oo dheeraadka ah.
.Hooyadan murugada ay lasoo daristay ayaa waxaa murugada iyo xanuunka hayo dhaawac kale ugu sii daray kadib markii seygeeda uu diiday inuu aabe u yahay canugaas, isagoo sheegay in qabiilkiisa aysan fir u lahayn dhalashada noocaan ah.
Tan iyo markii ay canugga ku dhashay xarunta caafimaadka ee Kidera III, laba todobaad kahor, Namaganda ayaanan marnaba farxin ama dhoolla cadeyn.
“Xaqiiqdii, ma hurdo habeenkii, waxaan ka fekeraa sidaan uga gudbi lahaa culeyska, xagee laga helaa malaayiin dollar oo qalliin lagula sameeyo,” ayay tiri mar la hadashay wargeyska New Vision ee kasoo baxa dalka Uganda.
Iyadoo ilmeyneysay, Namaganda ayaa sharaxday in canugga uu si wanaagsan caanaha u nuugo.
Labada lugood ee dheeraad ah ayaa bedelay muuqaalka guud ee canugga yar kuwaas oo uga yaala sinta bidix.